Faysal Rooble oo Tagey Tuli Guuleed iyo Daarimi – Radio Daljir
Faysal Rooble oo Tagey Tuli Guuleed iyo Daarimi
Janaayo 2, 2020 1:51 b 1
Aqoonyahan Faysal Cabdi Rooble oo waayashaan booqasho ku joogay Jigjiga ayaa maanta u baqooley degmada Tuli Guuleed ee gobolka Faafan. Faysal oo ay weheliyaan masuuliyiin heer degmo ayaa socdaal ku marey qaar kamid ah tuulooyinka hoosyimaada Tuli Guuleed, waxaana socdaalka ku weheliyey Wasiirka Xafiiska Hantidhawrka Guud ee DDS, Md. Ismaaciil Axmed iyo waliba Garaad Cabdimaalig Garaad Cismaan.
Bulshada Tuli Guuleed ayaa soodhaweyn heer sare ah u fidiyey aqoonyahan Faysal Rooble.
Faysal waxaa kale oo uu cagta soo mariyey tuulada DAARIMI oo hoostagta Tuli Guuleed, uuna ku yaal masaajidka taariikhiga ah ee uu dhisay Imaam AXMED GURAY. Masaajidka ayaa weli burburkii darbigiisu sii muuqdaa oo aan weli dib-u-dhis iyo dayactir toona helin.
Khudbaddi Faysal Cabdi Rooble kaga bogo wararkeena danbe.
Tuli Guuleed, DDS
Dowlad Deegaanka Soomaalida 154 Wararka 18923
DALJIIR 3 months ago
waxan bogadinaya #prof faisal rooble o soo maray melah tarikhga waxan kalo salamaya daljir dds